Myagdi News - प्रमुख प्रतिपक्षीको प्रश्न– ‘सरकार बजार अनुगमन खोइ ?’ - Myagdi News
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा सरकारमाथि बजार अनुगमनको विषयमा प्रश्न गरेको छ । उपभोग्य वस्तु खाद्यान्न दाल, चामल, तेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएर उपभोक्ताको ढाँड सेक्दा समेत सरकार मौन रहेको प्रतिपक्षी दल एमालेले आरोप लगाएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले के हेरिरहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै बजारमा यावत् उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । मूल्य वृद्धिकै कारण आम सर्वसाधारणले दैनिक जीवन चलाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
यसले सर्वसाधारणले राज्य भएको कसरी महशुस गर्ने ? ’ प्रतिप्रश्न गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘छिमेकी मुलुकमा कर समायोजन गरे भने पनि महँगीलाई घटाइएको छ, उपभोक्तालाई राहत दिएको छ । तर हामी किन सकिरहेका छैनौं । उल्टो सातामा नै दुई–दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य गरेर १८० रुपैयाँ पुर्याउने ?’ तीव्र मूल्य वृद्धिलाई नै मौका छोपेर बजारमा कालो बजारी समेत बढेको बताउँदै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, ‘सरकार बजार अनुगमन खोइ ?’रातोपाटीबाट
अब तुइनमा झुण्डिएर मेलम्ची खोला तर्नु पर्दैन